Casting matevina amin'ny rindrina manify - Casting matevina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina - Casting Minghe
Inona no atao amin'ny fanipihana ny rindrin'ny Thin-Wall?
Amin'ny fikatsahana ny firafitry ny antonony sy ny lanjan'ny lanjan'ny singa sy ny singa, ny aerospace, automotive, fitaovam-piadiana ary indostria hafa dia nanolo ireo ampahany izay noforonina tamin'ny filatsahana, fametahana ary ireo masinina tsotra miaraka amina fanodinana iray. Ny fanariana firaka tsy misy ferrous miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina 2.0 ka hatramin'ny 4.0 mm dia antsoina hoe fitorahana rindrina manify, ary ny fanariana firaka aliminioma miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina latsaky ny 2.0 mm dia antsoina hoe fitambaran-drindrina matevina. Amin'ny maha-dingana famoronana haingam-pandeha haingam-pandeha azy, ny casting casting dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, ny refy amin'ny refy avo lenta ary ny fahaizana mamorona fefy lavaka matevina vita amin'ny rindrina matevina miaraka amina endrika sarotra sy endrika mazava. Izy io dia mety indrindra amin'ny famolavolana tafiditra sy amin'ny famolavolana ny ampahany sarotra amin'ny rindrina manify.
Amin'ny famokarana maty amin'ny ampahany matevina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina matevina, dia misy lesoka maro avy amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fitaovana ary ny famenoana ny fanahafana ny fizotrany. Fikarohana bebe kokoa no ilaina amin'ny fahamarinan'ny firaka, ny milina fanariana maty, ny fitsaboana ny hafanana ary ny fanahafana.
The Casting misy rindrina manify ny alimo vita amin'ny aliminioma miaraka amin'ny mampiavaka ny mavesatra mavesatra sy ny toetra mekanika tsara dia manana fanantenana tsara amin'ny famoronana firafitra sarotra be toa ny vatan'ny fiara sy ny chassis automotive. Ao amin'ny Minghe Casting dia manome serivisy fanariana rindrina matevina mitarika indostrialy izahay ho an'ny ilain'ny ampahany aluminium
Fa maninona no misafidy serivisy fanaovana casting Minghe Thin-Wall Die?
aluminium firaka fanipazana rindrina matevina amin'ny rindrina no tena ampiasaina ao amin'ny vatana sy ny chassis an'ny fiara ambony. Ny sary 1 dia ny firafitry ny habaka alimika alimina an'ny vatan'ny fiara Audi A8. Ny andry B dia ny fanaparitahana habe lehibe indrindra, ny endrika sarotra indrindra, ary ny fepetra takiana mekanika avo indrindra. Ny habe ivelany dia manodidina ny 1 200 mm × 200 mm × 100 mm, ary ny hatevin'ny rindrina dia 1. .0 ～ 2.5 mm, sary 2 dia sary an-tsary ny rafitry ny vavahady. Hita avy amin'ny sary 2 sy sary 3 fa ity karazana gating ity dia mampiasa fomba amam-baravarana anaty vavahady maro, ary miaraka amin'izay dia mampiasa rafitra banga hanampiana, mitaky milina hafanana bobongolo hifehezana ny hafanan'ny bobongolo, ary ny fanariana mila mandalo fitsaboana hafanana manokana hahafeno ny fepetra farany ilaina, fa ny masontsivana manokana momba ny fantsom-pivoahana sy ny fitsaboana hafanana dia miafina.
Amin'izao fotoana izao, orinasa vitsivitsy any Shina ihany no afaka mamokatra casting maty maty manda vita amin'ny rindrina vita amin'ny alim-by, toy ny vatan'ny fiara any aoriana, ny vatan'ny fiara eo anoloana, ny andry B ary ny vatan-kazo lava dia miorim-paka, sns. maty casting dia ampiasaina amin'ny fonosana lohan'ny varingarina.
Minghe Casting dia mampiasa casting casting mba hamokarana saron-doha vita amin'ny aluminium ADC12 mahay miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina latsaky ny 2.5mm, azafady mba mifandraisa amin'ireto manam-pahaizana momba ny fanariana faty ireto mba hanampiana anao hisafidy ny fomba tsara indrindra hahitana izay ilain'ny tetikasa fanariana maty, na hangataka manonona teny momba ny tetikasa famonoana efitrano malalanao anio.
Ny tombony azo avy amin'ny Cast Die Ming Thin Wall
Ny fahamendrehana avo lenta dia azo tratrarina.
Ny rindrina manify dia azo tratrarina raha ampitahaina amin'ny famoahana vola.
Karazan-bika azo atao.
Ny kofehy ivelany dia azo alefa.
Ny lavaka dia azo alaina amin'ny habeny fandavahana anatiny.
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanipazana rindrina mahia
Safidio ny serivisy fanariana rindrina matevina tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manaparitaka rindrina manify dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana rindrina manify.